माइक्रोसफ्टले माइस्पेस शुरू ... स्पेस ... एर ... त्रुटि | Martech Zone
माइक्रोसफ्टले MySpace… Spaces… er… त्रुटि सुरुवात गर्‍यो
बुधवार, अगस्त 2, 2006 सोमबार, अगस्ट 24, 2009 Douglas Karr
मोजिल्ला फायरफक्समा माईक्रोसफ्ट स्पेसमा शीर्ष खोजी फाराममा खोज बटन क्लिक गर्दा मैले निम्न त्रुटि पाएँ।
इन्टर्नेट एकाधिकार नियम:
तपाईंले प्रतिलिपि गर्न आवश्यक छैन, तपाईंसँग खरीद गर्न पर्याप्त पैसा छ र सबैलाई निराशा बचत गर्नुहोस्।
सम्झनुहोस् कि त्यहाँ अरू ब्राउजरहरू छन्, त्यहाँ साँच्चै छन्! के तपाईंले ती मुद्दा चलाउन बिर्सनुभयो?
तपाईंसँग केहि पैसा भिन्न छ बनाउन को लागी पैसा छ। # १ गर्नुहोस् वा केही फरक गर्नुहोस्।
ब्लग पोष्टिंग इक्वेसन
अगस्ट,, २०१22006:२१ अपराह्न
.नेट फ्रेमवर्क स्थापना गर्न कोसिस गर्नुहोस्, समस्या तपाईले सोच्दछ जस्तो लाग्छ।
मैले वास्तवमा .NET फ्रेमवर्क लोड र चलिरहेको छु। म वास्तवमा .NET मा विकास गर्दछु। यदि यो वास्तवमा मुद्दा हो भने, त्यसो भए एक धेरै राम्रो त्रुटि सन्देश क्रममा छ। वा सायद स्क्रिप्ट जसले पृष्ठ लोड गर्नु अघि फ्रेमवर्क परीक्षण गर्दछ।
म केहि दिनमा फेरि प्रयास गर्न जाँदैछु।
जब म spaces.live.com लोड गर्दछु मँ खोज लिंक देख्दिन। सायद उनीहरूले यसलाई मर्मतकोलागि तल झारे?
जे भए पनि, तपाईंले यो बगलाई जिम्मेवार व्यक्ति जस्तो रिपोर्ट गर्नुभयो? मलाई शंका छ कि माइक्रोसफ्टको टोलीले यो ब्लग पढ्यो।
होईन, मैले यो बग Microsoft लाई रिपोर्ट गरेन। म विश्वास गर्दिन कि सफ्टवेयर उत्पादनहरूका अन्तिम प्रयोगकर्ताहरूले बगहरू रिपोर्ट गर्न जिम्मेवार व्यक्तिहरू हुनुपर्दछ। म दृढ परीक्षण र गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रमहरूमा विश्वास गर्दछु। माइक्रोसफ्टको नाफा दिईएकोमा, मलाई विश्वास छ कि माइक्रोसफ्टले यो खर्च गर्न सक्दछ
त्यो भनियो, मैले स्पष्ट भन्नु पर्छ कि म "माइक्रोसफ्ट बासर" होइन। यो याहू भएको भए, म उही सही सन्देश पोस्ट गरेको थिए।
यदि यो खुला स्रोत भएको भए, म बगलाई 'जिम्मेवार व्यक्ति' जस्तो रिपोर्ट गर्ने थिए।